Maxaa ka soo kordhay Wararka ku aadan MUSIIBADII Xalay ka dhacday Premier League…SAWIRRO – Gool FM
Maxaa ka soo kordhay Wararka ku aadan MUSIIBADII Xalay ka dhacday Premier League…SAWIRRO
(England) 28 Okt 2018. Waxaa soo dhacday oo qarax iyo bur-bur sameysay Helicopter-ka milkiilaha naadiga Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha.
Dayuurada qumaatiga u kacda ayaa u soo dhacday sababo lagu sheegay dhibaato dhanka Matoorka ah wax yar kaddib markii ay ka soo duushay garoonka King Power ay Leicester City bar baraha 1-1 kual gashay kooxda West Ham.
Inkastoo aan la xaqiijin xaalada Bilyineerka Srivaddhanaprabha, misane waxaa soo kordhaya wararka sheegaya inuu ka mid ahaa dadkii ay musiibada ku qabsatay Helicopter-ka bur burtay.
Ilo wareedyo ku dhow dhow reerkiisa ayaa BBC u sheegay inuu ka mid ahaa dadkii ay la soo dhacday Helicopter-ka.
Lama garanayo tirada dadka ku dhintay musiibadii xalay ka dhacday meel ku dhow garoonka King Power.
Laakiin waxaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen dhowr ruux oo uu ka mid yahay Milkiile Srivaddhanaprabha.
Srivaddhanaprabha ayaa had iyo jeer garoonka looga soo qaadi jiray Helicopter kulamada ay Leicester City ku ciyaarto mininkeeda, waxayna ilo wareedyo badan sheegayaan inuu ka mid ahaa dadkii ay la bur-burtay.
Taageerayaasha ayaa Saakay bilaabay inay Ubaxyo Tacsiyeen ah soo dhigaan bannaanka garoonka King Power oo xalay Musiibadu ka ag dhacday taa oo caddeyn u ah in bur burka Helicopter ka ay ku dhinteen xubno muhiim ah.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa iminka tibaaxaya in laga cabsi qabo in Milkiilaha Leicester City uu ka mid yahay 5-ruux oo ku geeriyootay musiibadii xalay dhacday, laakiin waxaa la aaminsan yahay in gabadhiisa aysan ka mid ahayn dadkii saarnaa Helicopter-ka.
Kala soco Goolfm.net wixii soo kordha….
Maxaa ku qornaa Funaanadii uu la soo baxay Luis Suarez markii uu Real Madrid ka dhaliyay goolkiisii Koowaad??